कोरोना महामारी निदान निम्ति खोपको चर्चा चुलिरहँदा बजारमा निमोनिया र रुघाखोकीजस्ता मौसमी रोगको निराकरण गर्ने खोप अभाव भएको छ । देशका अधिकांश भागमा अहिले यो खोप अभाव भएको छ ।
एक वर्षसम्म रुघाखोकी र निमोनिया नलाग्ने भन्दै सबै उमेर समूहका मानिसले यो खोपको प्रयोग गर्न थालेका छन् । नेपालमा आयात हुने यो खोप उपत्यका लगायत देशभरका मुख्य–मुख्य शहरमा अभाव हुने थालेको छ ।
कोरोना संक्रमितलाई निमोनिया र रुघाखोकीका लक्षण देखिने भएकोले धेरैले यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले बजारमा यो खोपको माग बढ्दै गएको छ । दशैँ– तिहारजस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरी तीन महिनाको लागि ल्याइएका खोप ७ दिनमा सकिएको औषधि आयातकर्ताहरू बताउँछन् ।
चिसो मौसम बढ्दै जाँदा रुघाखोकी लाग्न नदिन धेरै मानिसहरूले यो खोप लगाउने गरेका छन् ।
गैह्रीधारास्थित पद्मा फार्मेसीमा दिनमा १० जनाभन्दा बढी ‘फ्लु सर्ट’ तथा निमोनियाको खोप खोज्न आउने गरेको सञ्चालक महेन्द्र खडका बताउँछन् । अधिकांश ग्राहकहरूले मौसमी रुघाखोकीबाट बच्न फ्लु सर्टको प्रयोग गर्न थालेको उनले बताए ।
धेरै माग भएकोले फार्मेसीमा खोप सकिएको उनले जानकारी दिए ।
कोरोना संक्रमण हुँदा रुघाखोकी लाग्ने र फोक्सोमा असर गर्ने भएकोले निमोनियाबाट बच्नको लागि खोप खोज्न आउनेको संख्या बढ्दै गएको उनले सुनाए । सबै उमेर समूहका मानिसले यसको खोजी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
कम्पनी अनुसार खोपको मूल्य फरक छ । खोपको १५ सय रुपैयाँदेखि माथि मूल्य रहेको उनले जानकारी दिए । ‘खोप अलिक महंगो छ, तर सबै सदस्यका लागि माग गर्नेहरू पनि छन्,’ उनले भने, ‘पैसा तिर्न नसक्ने परिवारका दुई जनाले लगाउने गरेका छन् । धेरै माग भएकोले बजारमा यसको अभाव हुँदै गएको छ ।’
निमोनियाको लागि लगाइने र ‘फ्लु सर्ट’ जस्ता खोप एक सातामा भारतबाट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । नेपाल औषधि आयातकर्ता महासंघका महासचिव पवन आचार्यका अनुसार कोरोना संक्रमणको त्रासले यी खोपको प्रयोग बढ्दा बजारमा माग पनि बढिरहेको हो ।
ए बोर्ड कम्पनीले बनाएको खोपको नेपालमा बढी माग रहेको छ । फ्रान्सेली सेलोफी र ग्रिन क्रस कोरियन कम्पनीका खोप पनि आउने गरेका छन् ।
उनले भने, ’बजारमा कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै खोपको अभाव भएको हो । फ्रान्सेली, भारतीय र कोरियन कम्पनीको खोप आयात हुने गरेको छ ।’ कोरियन कम्पनीको खोप तत्कालै आउने अवस्था नरहेको उनले जानकाी दिए ।
अहिले बजारमा अभाव भएका खोप सरकारको नियमित तालिकामा नपरेको परिवार कल्याण महाशाखा, बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतम बताउँछन् । निजी कम्पनीले ल्याएका यी खोपको प्रयोग बढीरहेको उनले बताए । सरकारले प्रयोग गर्ने खोपहरूको तालिकामा अहिलेको खोप समावेश नभएको उनले जानकारी दिए ।
कोरोना संक्रमणको रोकथाम गर्छ भनेर धेरै मानिसले यो खोपको प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताए । प्रयोगमा आइरहेको खोपको कोभिडसँग कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको उनको दाबी छ ।
‘नेपालमा १२ वटा एन्टीजेन्ट खोपको प्रयोग गरिने गरिएको छ,’ डा. गौतमले भने,’ बालबालिकाको निम्ति निमोनियाको खोप दिने गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको लागि भने कुनै खोपको व्यवस्था गरिएको छैन ।’
सरकारले नयाँ खोप सम्बन्धी कार्यक्रममा यसको समावेश गर्नुपर्ने भएमा औषधि व्यवस्था विभागसँग अनुमति लिनुपर्ने उनले बताए ।
सामान्यतयाः अहिले बजारमा चर्चामा रहेको निमोकोकल खोप शरीरको लागि लाभदायी रहेको सरुवा रोग तथा संक्रामक रोग विशेषज्ञ अनुसन्धानकर्ता डा. जीवनबहादुर शेरचन बताउँछन् ।
जाडो मौसममा विभिन्न सरुवा रोग, कमन कोल्ड, भाइरल तथा अन्य जीनहरू उत्पादन हुने भएकोले यस खोपले शरीरका अन्य भागमा भाइरस फैलन नदिने उनको दाबी छ ।
‘खोपले शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ,’ उनले भने, ’खोपले ६० देखि ७० प्रतिशत भाइरसको मात्रालाई सक्रिय हुन दिँदैन । यसले शरीरमा प्रवेश गरेका विभिन्न भाइरसलाई निष्क्रिय बनाउने गर्छ ।’ खोपको मात्रा भएपछि शरीरको अन्य अंगले काम स्वतः काम गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
प्रतिरोधात्मक कम क्षमता भएको मानिसलाई खोपले काम गर्ने उनको भनाइ छ । कमजोर मानिस, गर्भवती, वृद्ध र बालबालिकालाई खोप लगाउँदा असर नगर्ने उनले जानकारी दिए । ६० वर्षदेखि माथि, ५ वर्ष मुनिका बालबालिका र दीर्घ रोगीलाई यो खोप प्रभावकारी देखिएको छ ।
कोरोनाले फोक्सोमा असर गरेपछि कार्बनडाइअक्साइड बाहिर निस्कन नपाउँदा क्षति गर्ने उनले बताए । फोक्सोलाई सुरक्षा प्रदान गर्नकै लागि भएपनि यस खोप प्रभावकारी रहेको उनको भनाइ छ ।